Kheyre oo Baydhabo kula shiray wakiilada dalal caalamka – Hornafrik Media Network
Kheyre oo Baydhabo kula shiray wakiilada dalal caalamka
By Liibaan Nuur	 On Sep 8, 2019
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, ayaa kulan looga hadlay wax ka qabashada baahiyha ka jira deegaannada Koonfur Galbeed iyo u diyaar garowga shir dhawaan lagu qabanayo Muqdisho, waxa uu magaalada Baydhabo kula yeeshay safiirradda dalalka caalamka u jooga Soomaaliya iyo wakiillada hey’adaha caalamiga ah ee fadhigoogu yahay Muqdisho.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Lafta-gareen oo Ra’iisul Wasaare Khayre ku wehliyay kulanka, ayaa soo bandhigay qorshayaasha horumarinta bulshada iyo deegaanka ee muhiimka ay tahay in laga taageero si loo gaaro horumarka bulshada Koonfur Galbeed.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa sheegay in qorshaha socdaalkiisa Koonfur Galbeed uu salka ku hayo horumarinta adeegyada bulshada iyo amniga Koonfur Galbeed, waxuuna safiirrada u sheegay inay lagama maarmaan tahay inay qayb ka qaataan qorshaha horumarinta deegaanada uu ka arimiyo maamulka Koonfur Galbeed.
Dhankooda Wakiillada iyo safiirrada kulanka ka qayb galay ayaa Ra’iisul wasaare Khayre ku ammaanay dadaal ay sheegeen inuu ugu jiro dib u soo kabashada dalka, waxeyna ballan qaadeen in maamul gobaleedka Koonfur Galbeed ay ku taageerayaan qorshayaashiisa horumarineed.
Gaba gabadii kulankaas ayaa looga hadlay sidii loogu diyaar garoobi lahaa shirka iskaashiga Soomaaliya iyo beesha Caalamka oo bilaha nasoo aadan lagu qabanayo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Dab geystay khasaare naf iyo maalba leh oo ka kacay Kaam ku yaalla Garowe
Madaxweyne Trump oo baabi’iyay heshiiskii nabadda ee dalkiisu lagalay Taalibaan.